ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဘာလဲ မသိရင်‬ အောင်စိုးကို ကြည့်ထား
ဘာလဲ မသိရင်‬ အောင်စိုးကို ကြည့်ထား
‎ဘာလဲ မသိရင်‬ အောင်စိုးကို ကြည့်ထား
(မိုဃ်းသွေး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ...)
ကုတ်ဖဲ့သိမ်းတာကို ခေါ်တာလားလို့များ ...
လေလံတွေတင်တဲ့ပွဲကို ပြောတာလားလို့များ ...
“အမေ အမေ” နဲ့ တကျော်ကျော်တနေတုန်း
ပခုံးနဲ့ ထမ်းတင်နေရတာများလား ...
၁၂ ပွဲဈေးတွေက သူတောင်းစားတွေလို
လေယာဉ်ပျံကြီးနဲ့ လှည့်တောင်းရတာလား ...
(ဒါတောင် ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် စီးချင်သေးတယ်ဆိုလား ...)
လူကြီးတွေကျတော့ မွေးနေ့တွေ ဘာတွေ ကျင်းပပေးတာလား ...
၂၅ ရာခိုင်နှုန်းက အိပ်ငိုက်နေပြီး
ဘုန်းဘုန်းတွေက ဥပဒေလိုက်ပြုနေတာလား ...
ပိုက်တွေနဲ့ ဆွဲထုတ်သွားတာလားလို့များ ...
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဈေးခေါ်ကြတာလား ...
ီဒီမိုကရေစီဆိုတာ ရှူး ... တိုးတိုးနေစမ်း
ကိုယ့်အိမ်ထဲကို ချွတ်နင်းလျှောက်နေရတာလား ...
တယ်လီဖုန်းကို သမဆိုင်မှာ ဆပ်ပြာဝယ်သလို
မဲနှိုက်ဝယ်လို့ ရတာလားလို့များ ...
ကြိတ်ပွဲလေးတွေ ထိုးကြတာလားလို့များ ...
တယောက်ယောက်ကို မေးကြည့်မလားလို့ ...
၅၀၅ နဲ့ ၇ ခါပြန်ညားသွားမယ်
ဘာလဲ မသိရင် အောင်စိုးကို ကြည့်ထား ... ။ ။
ဇူလိုင် ၂၃၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်
(ထောင်ဒဏ် ၁၁ ချခံလိုက်ရတဲ့ အမှုတွဲ ရဲဘော် ကိုအောင်စိုးသို့ ...)
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေဆီ
တဖွဲ.ပြီးတဖွဲ. သွားလိုက်ပြန်လိုက် ၊ သွားလိုက်ပြန်လိုက် ၊
သွားလိုက်ပြန်လိုက် ၊ သွားလိုက်ပြန်လိုက် ၊
အလုပ်များ ချင်ဟန်ဆောင်တာများလား ?
win than said...